घरेलु सामग्रीबाटै यसरी भगाउनुस् कक्रोच ! - IAUA
घरेलु सामग्रीबाटै यसरी भगाउनुस् कक्रोच !
ramkrishna November 21, 2016	घरेलु सामग्रीबाटै यसरी भगाउनुस् कक्रोच !
बजारमा कर्कोच भगाउने कैयन उत्पादन पाइन्छन्, तर यस्ता रासायनिक औषधिहरुको प्रयोग मानव स्वास्थ्यका लागि पनि हानिकारक हुनसक्छ । अझै तपाईंको घरमा साना बच्चा छन् भने, रासायनिक औषधि होइन, घरेलु उपाय नै अपनाउनुस् । आज हामी तपाईंलाई कर्कोच भगाउने घरेलु उपाय सुझाउँदैछौं ।
तेज गन्धवाला ल्वाङ पनि कर्कोच भगाउने उत्तम उपाय हो । कर्कोच धेरै लाग्ने ठाउँमा ल्वाङका केही टुक्रा अथवा धूलो राखिदिनुस् । यस उपायबाट कर्कोच भाग्छ ।
Previous Previous post: ढाड दुख्नु (Back Pain)
Next Next post: रुघाखोकी हटाउन यस्तो औषधी ! खानु कसरी ?